Ịzụta CD si CD Store offline
N'ileghachi anya na-ege ntị na ezi ihe ụfọdụ music? Ị pụrụ ọbụna tụlee ịzụ CD si offline. Mgbe nwere ike ị chọrọ nnọọ ịtụ music online, iwu CD offline nwere ya uru kwa. Ebe a bụ anya.
1. Music ụlọ ahịa USA:
2. Music ụlọ ahịa Australia
3. Music ụlọ ahịa UK
4. Music ụlọ ahịa Canada
5. Music ụlọ ahịa Germany
Uru nke ịzụ CD si offline CD ụlọ ahịa:
Nzi ohere: I nwere nzi ohere na CD na nwere ike ịlele ọnọdụ gafee counter. Ị pụrụ ọbụna ina-akpọ ya na ụlọ ahịa tupu ebu otu ihe ahụ n'ụlọ.
Isi pụrụ iche price: The ụlọ ahịa nwere ike a pụrụ iche price-enye maka ụbọchị na i nwere ike inweta ya na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Bonding maka kasị mma: Ọ bụrụ na ị bụ onye na music buff i nwere ike mgbe ụfọdụ chọrọ ịzụta a pụrụ iche CD ma ọ bụ abụọ n'ụbọchị nke ya igba egbe. The ụlọ ahịa na ebe ị ugboro ugboro gaa nwere ike ndokwa na gị! E wezụga na, na-echekwa na-emekarị ka ha mgbe niile ahịa maara banyere pụrụ iche na-enye. Ị nwere ike ego na ndị dị otú ahụ na-enye dị ka gị mma.
Ka na-a ngwa ngwa anya na CD-echekwa gburugburu ụwa.
Dị ka otu n'ime ndị kasị chọọ mgbe azụmahịa n'ógbè nlekọta ọrụ na ụwa, USA dị ka ihe niile ndị ọzọ ulo oru na-akpata uto nke music ụlọ ọrụ oke. N'ihi na elu disposable ego nke US ụmụ amaala na ịzụta ike nke dollar na n'ụwa aku na uba USA bụ a hotspot azụmahịa ebe maka niile. Nke a fọrọ nke nta na-arụ ọrụ ịtụnanya maka uto nke offline CD-echekwa n'ebe mmekọrịta na na online echekwa.
Music ụlọ ahịa San Antonio:
San Antonio bụ nke asaa kasị populous obodo na USA na ọ bụ nke abụọ kasị populous obodo na Texas. Sonso 3.5% nke ndị bi na ya bụ na-enweghị ọrụ. Nke a na ndị ọzọ okwu ushers ka a ahịa ukwu maka CD. Foto zuru okè obodo nwere ọtụtụ ama egwú nakwa dị ka music echekwa.
1.Sam Ash Music-echekwa
2. Music ụlọ ahịa Australia:
Music nwere ihe pụrụ iche ebe ke Australia. Ị ga-ahụ ụfọdụ oké offline CD-echekwa na obodo ndị dị ka Melbourne, Perth, Brisbane na Sydney.
1.World nke Music
5.Vintage Record na Annandale
3. Music ụlọ ahịa UK:
UK nwere ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị music echekwa agbasa n'elu isi obodo;
4. Music ụlọ ahịa Canada:
Canada bụ mba ke edere edere akụkụ nke North America na na enriched na music na omenala.
Music ụlọ ahịa Toronto:
Toronto bụ n'ógbè isi obodo na obodo kacha ibu na Canada. Ụfọdụ nke oké music echekwa na-ere CD bụ:
1. Steve si Music Store
5. Music ụlọ ahịa Germany:
Mbụk Germany nwere a pụrụ iche n'ebe; otú na-aga na music nke mba ahụ. Ụfọdụ nke ama music echekwa e nwere:
> Resource> Music> Zụrụ CD si CD Store-anọghị n'ịntanetị